Home Wararka Laftgareen oo ka horyimid jadwalka dhaarinta Xildhibaanada
[DEG DEG] Laftgareen oo ka horyimid jadwalka dhaarinta Xildhibaanada
Kaddib markii Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo saareen jadwalka soo xareynta xildhibaanada la doortay ee baarlamaanka 11-aad, iyadoo la qorsheeyey in ugu dambeyn 14-04-2022, la qabto xafladda dhaarinta xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka dalka.
Hoggaanka KG Laftgareen ayaa ka horyimid Guddiga Doorashada isagoo sheegay in aanu waxba kala socon, lagalana tashan go’aanka ay soo saareen Guddiga.
Qoraalka hoose aya ka soo baxay xafiiska Laftgareen daqiiqado kaddib Go’aanka Guddiga Doorashada Heer Federal
JADWALKA ISU YEERISTA IYO DHAARINTA XILDHIBAANNADA LABADA AQALKA EE SOO BAXAY WAA TALLAABO SHARCI DARRO.
BAYDHABO, 16ka Maarso 2022: Dowladda Koonfur Galbeed waxay caddaynaysaa inaysan waxba kala socon jadwalka la faafiyay ee ku saabsan hannaanka loo marayo isu keenista, shahaado bixinta iyo dhaarinta xildhibaannada la doortay ee Labada Aqalka ee Barlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sidaas darteedna warqadda soo baxday aysan ahayn mid dhaqangal ah.
Ugu dambeyntii, Dowladda Koonfur Galbeed waxay xaqiijinaysaa in Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddiga Doorashooyinka Heer Federaalba wax kaalin ah oo sharci waafaqsan aysan ku lahayn u yeerista iyo qabanqaabada dhaarinta Xildhibaannada la doortay, waajibaadkaasna uu sharcigu siinaayo Barlamaanka 10aad sidii dhacday Barlamaankii 9aad oo ah doorashadii u dambaysay ee dalka ka qabsoomay 2016/2017.
Previous articleGuddiga doorashada heer federaal oo shaaciyey maalinta la dhaarinayo xildhibaanada
Next articleGuddiga doorashada heer Puntland oo gudoomiye ku xigeen cusub doortay
(Daawo) MW Farmajo oo amray in Baaritaan lagu sameeyo Wasiir Beyle...